मनसुनी न्यूनचापीय प्रणालीले बदली र वर्षा
काठमाडाँ । मनसुनी न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले शनिबार देशभर बदली भएसँगै केही स्थानमा वर्षा भएको छ । उक्त प्रणालीका कारण देशको मध्य भेगमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालबाट विस्तारै सर्दै गरेको र मध्य भेगमा न्यूनचापीय क्षेत्रको विकासले काठमाडौँ उपत्य...
दाङमा पाँच महिनादेखि भूमिसुधार कार्या...
भाद्र ३, 2074 दाङ । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङ पाँच महिनादेखि कार्यालय प्रमुख विहीन भएको छ । भूमिसुधार अधिकारी टीकाराम ढकाल चैत १३ गते सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुख विहीन बनेको हो । सरुवा भएको पाँच महिना पुग्दा समेत नयाँ कार्यालय प्रमुख नआउँदा कार्यालयबाट प्र...
तरकारी खेतीमा प्रख्यात बन्दै लक्ष्मिन...
भाद्र ३, 2074 महोत्तरी । गौशाला नगगरपालिका– १२ साविकका लक्ष्मिनियाँ गाविस –७ का ६५ वर्षिय रामचन्द्र महतो तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने गरेका छन् । केहीवर्ष अगाडिमात्रै शिक्षक सेवाबाट अवकास पाउनुभएका महतोले वैज्ञानिक विधिद्वारा आ...
नेपाली एनजिओद्धारा विदेशी एनजिओमाथि उ...
भाद्र ३, 2074 काठमाडौं । ज्योतिको घर–नेपाल (लाईट हाउस फाउण्डेशन नेपालले स्विडिस एनजिओ लभ नेपाल(पछि नाम परिवर्तित लभ एण्ड होप) ले सामाजिक कार्यको नाममा गैरकानुनी तथा गलत धन्धा चलाएर करोडौं रकम कुम्ल्याएको आरोप लगाएको छ ज्योतिको घर–नेपा...
अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको बाह्रबिसे–क...
भाद्र ३, 2074 चौतारा । अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको बाह्रबिसे–काठमा्डौ सडकखण्डको महभीर र जुरेमा पहिरो जाँदा सवारी आवागमन ठप्प भएको छ । अविरल वर्षाका कारण महभीर र जुरेमा पहिरो गएको हो । बाह्रबिसे, तातोपानीबाट राजधानी जाने प्रमुख सडक महभीर,...
फोटो पत्रकारलाई विमानको व्यवस्था गर्न...
भाद्र ३, 2074 काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले १ सय ७८ औँ विश्व फोटोग्राफी दिवसका अवसरमा शनिबार प्रभातफेरी आयोजना गरेको छ । सन् १८३९ अगस्ट १९ मा फ्रान्सबाट फोटोग्राफीको सुरुआत भएको र त्यसको उपलक्ष्यमा नेपालमा पनि १३ वर्षदेखि व...
भाद्र ३, 2074 पोखरा । एथलेटिक्सका प्रशिक्षक एभानकुमार रञ्जीतको शनिबार बिहान ४५ वर्षका उमेरमा निधन भएको छ । केही दिनदेखि निमोनियाका कारण सख्त बिरामी परेका रञ्जीतको पोखराको पूmलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचारका क...
बाढीपीडित बालबालिकालाई एसओएसले संरक्ष...
भाद्र २, 2074 भक्तपुर । एसओएस बालग्राम नेपालले बाढीपहिराका कारण आफ्ना बाबुआमा गुमाएका केटाकेटीलाई संरक्षण गर्ने भएको छ । पहाडी जिल्ला इलाम र तराईका बाँके, बर्दिया, सुनसरी, मोरङ, इटहरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सलार्ही महोत्तरीसहित ३०...
काँग्रेसले रुकुममा हामी माथि गरेको क...
भाद्र २, 2074 काठमाडौं । सांसद मिठ्ठु मल्लले चरित्र हत्या गर्ने मनसायले काग्रेस जिल्ला कार्यसमिति रुकुमले आफुमाथि कार्वाही गरेको आरोप लगाएकी छिन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद मल्लले गत बैशाख ३१ गते भएको स्थानीय ...
पशुपन्छीको ठूलो संख्यामा क्षति
भाद्र २, 2074 काठमाडौ । पशुपन्छीको क्षतिबाट झण्डै रु १० अर्ब १७ करोड ८८ लाख गुमेको छ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुखुरा, बोका– बाख्रा, गाईभैँसी, बंगुरको क्षतिका कारण सो रकम गुमेको हो । पूर्वी र मध्य तराई तथा ब...
तेस्रोलिंगी मोनिकाको विवाह विवादमा, य...
भाद्र २, 2074 काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले तेस्रोलिंगी मोनिका शाहीको विवाहलाई समलिंगी विवाह भएको भनेर नबुझिदिन आग्रह गरेको छ । समलिंगी विवाह कानुनी मान्यताको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा कस...
बजारको फोहोर गाउँ आउन रोक
भाद्र २, 2074 तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ गोलौराका जनताले बजारको फोहोरबाट आफूहरु पीडित भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् । हाम्रो तुलसीपुर, राम्रो तुलसीपुर अभियान अन्र्तगत वडा नं. ६ का जनप्रतिनिधीहरुले शुक्रबार आय...
पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी विषय प्रधान...
भाद्र २, 2074 काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका बेला सरकारले हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, डिजे...
अविरल वर्षासँगै बिथोलियो वन्यजन्तुको ...
भाद्र २, 2074 भाद्र । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले चितवन निकुञ्जमा रहेका ५ वटा गैंडा बगाएको छ । २ वटा बगेर भारत पुगेका हुन् । ३ वटा निकुञ्जअन्तर्गतकै नवलपरासी क्षेत्रमा पुगेको निकुञ्जले जनाएको छ । बाढीले बगाउँदा एउटा गैंडा, एउटा रतुवा र...
नेपालको मौसम अध्ययन गरी फर्कियो रुसी ...
भाद्र २, 2074 काठमाडौँ । नेपालको उच्च मौसमी अध्ययन गर्न काठमाडौँ आएको रुसी विमान स्वदेश फर्किएको छ । एसियन मौसमी प्रणालीबारे अध्ययन गर्न एक महिनाअघि काठमाडौँ आएको विमान ३ दिनअघि स्वदेश फर्किएको थियो । रुसी महासंघले पठाएको उक्त विमानसँ...
← अघिल्लो 12… 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 … 1093 1094 पछिल्लो →